लघुकथा: फेसबुक स्टाटस::Hamrodamak.com
लघुकथा: फेसबुक स्टाटस
सुन्नोस त हजुर, ” तपाइँको कान्छी सालीले पनि यसपाली एस. इ. इ.मा फस्ट डिभिजन निकालेर पास गरिन् । हामी सबैको प्यारो अनि एउटै बहिनी हो । भिनाजु बिदेशबाट आउदा एउटा राम्रो खाले मोबाइल ल्याइदिए त कति खुशी हुन्थेंं भन्दै फुर्किन्दै थिइन् अरे ।” सुन्तलीले एकै सासमा आफ्नो श्रीमान बिरेलाई फोनमा सुनाइन् ।
प्रत्युतरमा बिरेले भन्यो, ” ए, होर ? लु तेसो भए बहिनीलाई धेरै धन्यवाद छ, भन्दिनु है ।” बुढाको कुरा सुनेर सुन्तलीले मनमा कस्तो कस्तो मान्दै भनिन् , ” हस् , हजुर हुन्छ ।” उनले फेरि कुरा थपिन् , “अनि सुन्नु न ! तपाइकै बहिनीले पनि दाइले मोबाइल ल्याइदिए त क्या मज्जा हुन्थ्यो होला है भाउजू भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।”
बिरे फोनमा फेरि बोल्छ, “अरे यार ! भयो के तिम्रो त्यो गनगन नसुनाउ न । के यहाँ चै पैसाको बोट छ र ?” ए बुढा के छ, कसो छ ? सन्चो बिसन्चो, खायौ खाएनौ सोध खोज त हैन ए ….के के र के के कुरा गरिरहन्छे ।” ” ए मेरो हजुर यो त हाम्रो आफ्नै घर भित्रको कुरा हो क्या । ” सुन्तलीले बुढालाइ थमथमाइन । बिरेले केही बेर घरमा कुराकानी गरेर फोन राख्यो ।
हिजो मात्रै मावली परिवारबाट पनि सानी बहिनीले बिरेसँग फोनमा हाँस्दै गफ गर्दा, दादा एउटा ब्लान्केट ल्याइदिनु न, ल ? भनेको र उसले पनि कुरा काट्न नसकेर ” ल, हुन्छ ” भनेको कुरा सम्झ्यो।
केही बेर पछि फेरि उसलाई नेपालको नयाँ नम्बरबाट कल आयो । उसले पनि फोन उठाएर बोल्यो । पल्लो गाउँको नरेले फोन गरेको रैछ । फोनमा नरे बोल्यो, ” दाइ ! तपाइँ घर आउने कुरा फेसबूकमा हाल्नु भएको थियो हो ? यो कुरा त मैले पनि अस्तिनै चोकमा सुनेको थिएँँ । त्यो सुन्दा त एउटा सानो कुरा भनौ कि भनेर फोन गर्या नि । फेस बूक चल्ने एउटा राम्रो मोबाइल ल्याइदिनु भए त कति खुशी हुन्थें । मैले पनि हजुरको घरमा कति काम सघाइदिइरहेको छु नि । यो सादा सेट मोबाइल कति चलाउनु हौ । मैले त दाइलाई धेरै सम्झिरहेको छु है ।” नरे साथीको यो कुराले बिरेको मन छोयो ।
तर बिरेलाइ यस्ता कुराहरूले मनमा दिक्क लागिरहेको थियो । नलागोस पनि कसरी ? केही दिन अगाडि बिरेले फेस बूकमा घर आउने कुरा स्टाटस बनाएर पोष्ट गरेको थियो ।
सबैले थाहा पाएछ्न क्यार । सायद, त्यै भएर उसलाई दिनदिनै नेपालबाट फोन आउन थालेको थियोे । फेस बूकको मेसेज बक्समा समेत यस्तो र उस्तो सामान ल्याइदे ल भन्दै मेसेज आउन थालेको थियोे । उसले बिदेशमा दुई रियलको एउटा डिउ किनेर खानु पनि तीन पल्ट सोच्नु पर्छ । हैन कति सजिलो हौ यो मान्छेको जातलाइ यस्तो चिज ल्याइदेउ उस्तो चिज ल्याइदेउ है भन्नू पनि ? वाह .! फेस बूकमा घर आउने एउटा सानो स्टाटस राख्दा मान्छेहरू यत्रो प्रभावित ..? बिरे छ्क्क पर्दै एक्लै हाँस्न थाल्यो ।